nQiiri Bogagga Kordhiyay Booqashadoodii oo dhan 9.6%. | Martech Zone
Khamiista, Noofembar 17, 2011 Khamiista, Noofembar 17, 2011 Douglas Karr
Waxaan soo marnay xoogaa koritaan ah Martech Zone bilihii ugu dambeeyay. Dadku waxay na weydiisteen waxa ay khiyaamadu yihiin mana jiraan wax ay noqdeen. Waxay ahayd tan shaqo adag, taas oo ka dhigaysa waxyaabahayaga mid mudnaan leh maalin kasta. Waxaan si fiican u qornay, si badana u qornay, waxaan ku wadaagnay qaddiyado kala duwan oo mowduucyo ah, waxaanna kor ugu qaadnay waxyaabaha sida ugu wax ku oolsan - gaar ahaan shabakadaha bulshada.
Xaqiiqdii, raadinku wuxuu ahaa isha # 1 ee boggan illaa dhowr bilood kahor. Waxaan saacado iyo saacado ku qaadan jiray hagaajinta bogga oo aan ku dhiirrigelin jiray si aan dhowr inji u helo. Mar alla markii aan dalbaday isla dadaalkaas hagaajinta nuxurka iyo dhiirrigelinta bulshada, Injiyadahaasi waxay isu rogeen daarad. Nofeembar waxay noqon doontaa bil noogu wanaagsan ever waxaana ka badnaan doonaa 100,000 booqashooyin!
Mid ka mid ah tweak aan sameynay taas oo ka caawisay ayaa naga go'aysa plugin content jir la xiriira mid cusub ka nQormarka. nRelate kuma tiirsanaado 'algorithms' raadinta WordPress - dhab ahaantii way gurguuranayaan bartaada oo waxay muujinayaan waxyaabaha laftooda ah. Oo waxay ku muujinayaan waxyaabaha ku jira sawirro badan oo sawir ah bogga oo dhan.
Waxaan ku adkaystay in yar oo ka mid ah macaamiisheenna oo ay ku jiraan sawirrada ku jira qoraalladooda ay kordhin doonaan hawlgelinta bogga. Fidintaani waxay cadeyneysaa ujeedkeyga. Bogagga halkii booqday waa 9.6% tan iyo markii lagu rakibay fiilada. Waa la oggol yahay in ay noqon karaan arrimo kale oo ay ka mid yihiin, laakiin kuma kalsooni in taatikada kale ee aan geynay ay gebi ahaanba diiradda saartay kordhinta tirada bogagga la booqday
Waa quruxsan dad yahow… dadku waxay soo jiitaan sawir, ma ahan qoraal!
Ha Dhigin Emailka Guraha Dambe!
Nov 18, 2011 at 10: 36 AM
Waa inaan waliba kudarsadaa in waqtigeena goobta ay ku egtahay qiyaas isku mid ah!